Mareykanka oo ballaarinaya dagaalkiisa dhinaca diyaarada aan duuliyaha lahayn ee Somaliya | Saadaal Media
Mareykanka oo ballaarinaya dagaalkiisa dhinaca diyaarada aan duuliyaha lahayn ee Somaliya
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay ballaarineyso howlgallada dhinaca Cirka ah ee ay fuliyaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Drones-ka loo yaqaan.
Warbixin ka soo baxday C.I.A-da Mareykanka ayaa lagu sheegay in Mareykanka uu dhimayo ciidanka dhulka ah beddelkeedana uu kordhinayo weerarrada dhinaca cirka ah ee ka dhanka ah kooxaha ka dagaallama Afrika.
Mareykanka Dalka Niger oo kaliya waxaa markii hore ka joogay 100 Askari oo dhulka ah,waxaa ay hadda gaarayaan 800 oo Askari,waxaana dowladdu sheegtay in Ciidamadaas laga qaadayo Niger laguna beddelayo saldhig diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ka haadaan oo laga dhisayo dalkaasi.
Saldhigga ayaa laga sameynayaa Magaalada Agadez, ee bartamaha Dalka Niger,kaas oo ay ku baxeyso lacag dhan $100 Milyan oo doollarka Mareykanka ah.
Tan iyo 2003dii Mareykanka ayaa weerarro cirka ah ka fulinayay Soomaaliya,waxaana warbixin ka soo baxday Pentagon-ka uu ku sheegay in khasaaraha dadka rayidka ah ee Soomaalida ah gaaray uu dhanyahay 22 ilaa 37 oo dhimasho ah.
tirada guud ee Weerarrada Mareykanka ee Soomaaliya uu ku sheegay 92 weerar oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah waxaana ku dhintay 666 ilaa 743 qof.